Yako Webhusaiti Hachisi Chirongwa | Martech Zone
Yako Webhusaiti Hachisi Chirongwa
Muvhuro, Zvita 8, 2014 Douglas Karr
Tiri pakati pekubatsira mutengi mutsva ne webhusaiti redesign. Saiti yavo yazvino inoita kunge yakaitwa makore mashoma apfuura uye inoita saizvozvo. Iyo yakagadziriswa HTML isina kupindura, yakaoma URL chimiro, uye hapana zvemukati manejimendi system kumashure kwayo. Panguva iyoyo, saiti iyi yanga iri basa chairo uye ndine chokwadi chekuti vakaisa mari mukati mawo - asi hazvisi kuvashandira zvakare.
Pane kuyedza kwechikwata pamadhizaini matsva, ayo anononoka kugadzirwa sezvo zvichinyanya kutsamira pakubvumirana pakati pevatambi. Isu takanyatsojairwa kune aya mamiriro uye takashanda kuburikidza nematambudziko mukugadzirisa dhizaini munguva yakapfuura.
Imwe nyaya inowirirana haisi iyo saiti kana dhizaini zvachose, iri kuchinja iyo paradigm iyo a webhusaiti kugadzirisazve chirongwa uye kwete maitiro. Pane tarisiro inosiririsa yekuti dhizaini yega yega, chidimbu chega chega chemukati, uye zvese zvekufambisa zvinofanirwa kunge zvakakwana.
Ivo havazove nekuti mashandiro ewebhusaiti haigone kufanotaurwa kudzamara rararama uye vashandisi vari kutaurirana nayo. Ini ndinowanzo kuseka nemakambani kuti yavo webhusaiti iri kwete kwavo - ndeyevashanyi vavo. Vamwe vanozviona zvichisemesa sezvavanotarisa kune yakamisikidzwa-yakanaka, saiti yakanaka iyo yakatangwa zvakaringana sezvavangaite yavo yemwana. Dzimwe nguva mwana wavo; zvisinei yakanaka, haisi kuita mushe nevamwe vese vekirasi.
Chinhu chikuru nezve zvemazuva ano zvemanejimendi manejimendi manejimendi ndeyekuti iwe une zvese zvigadzirwa zvewebhu saiti zvakasiyana. Kana kufamba kwacho kusingashande… hapana kunetseka… kugadzira imwe nyowani. Kana dhizaini isiri kushanda… tora imwe nyowani. Kana zvirimo zvisiri kushanda, nyora nyowani zvemukati.
At DK New Media, isu kashoma patinonyora projekiti-yakavakirwa kubatirana kwenzvimbo yekugadzirisa patsva nekuti isu tinoziva kuti saiti inoda nguva yekuita uye kuyerwa. Yedu shoma mazuva makumi mapfumbamwe kuti tikwanise kuita chero shanduko dzinogona kutadzisa kutsvaga kuoneka uye kutipa nguva yekushandurwa kwekugadzirisa.
Ichi chikonzero nei zvichikosha kuti yako saiti ivakwe pane yakasimba zvemukati manejimendi manejimendi neese kugona. Mushure mekunge yako saiti yatanga, iwe unofanirwa kungodzokera kunogadzira kana iwe uchitsvaga maficha matsva. Asi marongero, hutongi uye verbiage zvese zvinofanirwa kuchinjaniswa nemutengi.
Kana tikaburitsa saiti nyowani uye ikasaita zvirinani kana mutengi achiwana mamwe magadzirirwo, chinhu chikuru ndechekuti tinogona kugara tichigadzirisa - zvese zvidiki kana zvikuru. Kana iwe uchida kuhwina mujaho, zvakadaro, iwe unofanirwa kurega mota yekare uye kutora iyo nyowani munzira kuti utange kuyedza.
Tags: webhusaiti redesign
Chirevo: 68% yevakuru vakuru VASINA Hutano hweMedia
Maitiro Ekuyera iyo ROI yeMobile Apps